Axmed Madoobe: "Galmudug waa State Sharci ku dhisan maaha in Ahlu Suna & Caqabad lagu kiciyo.." - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Axmed Madoobe: “Galmudug waa State Sharci ku dhisan maaha in Ahlu Suna & Caqabad lagu kiciyo..”
Isagoo magaalada Kismaayo kula hadaly saxafiiyiinta kadib kulan uu la yeeshay wakiilada Beesha Caalamka ayuu kusoo qaaday xaaladda kasoo korortay Galmudug, isagoo caddeeyay inay tahay caqabad kale.
“Waa nasiib darro iyadoo kuwii hore aan xal u la’ nahay inay caqabad kale kasoo kororto Ahlu Suna iyo Galmudug. Galmudug waa State sharciyad ku dhisan, madax la doortay leh. Wax kastoo caqabad ah oo maanta lagu kiciyo xalka qeyb kama noqoneyso..” ayuu yiri Axmed Madoobe.
Doorashadii xubnaha ka harsan Aqalka Sare ee Jubbaland ayuu sheegay inay dhaceyso Isniint Berri, ayna tajo badan ka qabaan in si dedgeag loo guda galo Doorahsada Golaha Shacabka.
Previous articleXildhibaan hore uga tirsanaa Golaha Wakiilada Somaliland oo lagu qabtay Garoonka Hargeysa, kadib…
Next articleFaahfaahin: Qarax ka dhacay Magaalada Baardheere iyo Xaaladda Mas’uulkii lala beegsaday…